एक महिला जसले २६ महिनाको अन्तरमा जन्माइन् ६ सन्तान ! – Mission
एक महिला जसले २६ महिनाको अन्तरमा जन्माइन् ६ सन्तान !
प्रकाशित मितिः शुक्रबार, साउन १४, २०७३
एजेन्सी– अमेरिकाको एक महिलाले जम्मा २६ महिनाको अवधिमा लगातार तीन पटक जुम्ल्याहा बच्चा जन्माएकी छिन् । सामान्यतया बच्चा ९ महिनामा जन्मिन्छ । त्यसपछि सुत्केरी अवधि र पुनः गर्भाधारण हुन केही महिना थप लाग्ने गर्दछ ।
तर, अमेरिकाको कान्सस सहरकी दनेसा कौचले भने २६ महिनाको अवधिमा तीन–तीन पटक नै जुम्ल्याहा बच्चा जन्माएकी छिन् । भर्खरै २० वर्ष मात्र पुगेकी दनेसाले १० दिन अघि मात्र तेस्रो पटक जुम्ल्याहा छोरी जन्माएपछि चिकित्सकसहित आफन्तहरु आश्चार्यमा पारेका छन् ।
छोरी जन्मे लगत्तै उनीहरुको नाम डार्ला र डिलानी राखियो । उनले सन् २०१४ को अप्रिलमा पहिलो जुम्ल्याहा छोराहरु जन्माएकी थिइन् । छोरा जन्मे लगत्तै डनारियस र डेस्मोन्ड नाम राखिएको थियो । तर, उनको एक छोरा डेस्मोन्डको भने प्लासेन्टल एब्रुप्सनका कारण मृत्यु भयो । डनारियस भने अहिले स्वस्थ छन् ।
‘भर्खरै जन्मेको छोरा गुमाउनु पर्दा असह्य पिडा हुने रहेछ,’ दनेसाले भनिन्, ‘शारिरीक र मानसिक रुपमा कमजोर भैसकेको थिएँ । त्यो समय साँच्चै मेरा लागि खराब समय थियो ।’
त्यसको एक वर्षपछि २९ मे मा दनेसा दोस्रो पटक सुत्केरी भइन् । यो पटक पनि उनले जुम्ल्याहा नै जन्माइन् । ‘यो मेरा लागि वरदान थियो । अझ भन्नुपर्दा छोरा डेस्मान्डको मृत्युपछिको बरवादन हो,’ उनले हाँस्दै भनिन्, ‘त्यसपछि त मेरी आमाले मलाई ‘डबल ट्रबल’ भनेर समेत बोलाउनु भयो ।’
र, १७ जुन २०१७ का दिन अर्थात दश दिन अगाडी मात्र दनिसाले पुन जुम्ल्याहा छोरी डार्ला र डेलानीलाई जन्म दिइन् । दुई वर्ष दुई महिनाको छोटो अवधिमा तीन पटक लगातार जुम्ल्याहा बच्चा जन्माएकी दनिसाको स्वास्थ्य अहिले राम्रो रहेको चिकित्सकले बताएका छन् । यस्तै उनका पाँच सन्तान पनि पूर्ण रुपमा स्वस्थ छन् । दनिसा भने सुरुमा जन्मेको एक छोराको मृत्यु नभएको भए अझै घरमा खुसीयाली छाउने बताउँछिन् । (बिबिसीबाट)
प्रकाशित मितिः शुक्रबार, साउन १४, २०७३ 9:09:44 AM |
Prev लागूऔषध तस्करीमा संलग्न चार जनालाई मृत्युदण्ड